Diblomaasiyiin Soomaaliyeed oo tababbar loogu soo gabo gabeeyay Dalka Qatar | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Diblomaasiyiin Soomaaliyeed oo tababbar loogu soo gabo gabeeyay Dalka Qatar
Diblomaasiyiin Soomaaliyeed oo tababbar loogu soo gabo gabeeyay Dalka Qatar
Diblomaasiyiin ka socday Dawladda Soomaaliya ayaa tababbar loogu soo xiray magaalada Doha ee Caasimadda dalka Qatar, waxaana intii uu tababbarku socday ka faa’iidaysteen casharo kala duwan oo la xiriira siyaasadda arimaha dibedda iyo sida Dalalka horumaray ay u maareeyaan.
Tababbarkan ayaa sidoo kale waxaa ka faa’iideystay diblomaasiyiin ka socday Dalka Suuriya iyo Masuuliyiin ka tirsan Safaaradda Soomaaliya ee dalka Qatar.
Waxaa munaasibad shahaadooyin lagu guddoonsiiyey diblomaasiyiintan loogu qabtay Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar, waxaana ka soo qayb galay mas’uuliyiin ka tirsan Dawladda Qatar, kuwaasi oo sheegay inay ka go’antahay inay caawiyaan oo barbar istaagaan walaalahooda kale.
Intii uu kulanku socday waxaa Dawladda Soomaaliya lagu ammaanay tallaabooyinka wanaagsan ee ay u qaaday dhinaca Dawladnimada iyo horumarka, waxaana la xusay inay taasi muujinayso inay Soomaaliya soo ceshato doorkii ay ku lahayd caalamka, waxaana sidoo kale lagu ammaanay Xukuumadda Soomaliya doorkii dhex-dhexaadnimada ahaa ee ay ka qaadatay xiisadda Khaliijka ka taagan.
Qunsulka Safaaradda Soomaaliya ee dalka Qatar Mukhtaar Cali Yuusuf ayaa sheegay in dhallinyaradu si wanaagsan uga faa’iidaysteen tababbarka, Isla markaana ay yihiin kuwa oo waciygoodu sareeyo, wuxuuna u mahad celiyey Wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar iyo dhamaan howlwadeenada Wasaaradda.
Sidoo kale Qunsulka ayaa Dawladda Qatar uga mahadceliyey taageerada ay Soomaaliya la garab taagan tahay.
W/D: Ahmed Darwiish
Previous articleMilateriga Turkiga oo gudaha u galay Suuriya
Next articleWasiirka Howlaha Guud oo sharxay dhismaha guryaha uu Turkiga balanqaaday